घर > प्रेरक ब्लग- way2inspiration.com > शीर्ष5मा Google मा आफ्नो वेबसाइट छिटो श्रेणीका एसईओ रणनीति 2018
पोस्ट मार्च 29, 2018 मार्च 29, 2018 एक. Bharadwaj
सबैलाई सर्प मा शीर्ष स्थिति प्राप्त गर्न आफ्नो वेबसाइट प्रेम. तर यो प्रत्येक ब्लग शीर्ष स्थिति मा श्रेणीका लागि सम्भव छैन. तपाईं राम्रो गुणस्तर पोस्ट लिख छन्, राम्रो खोजशब्द अनुसन्धान गरिरहेको, राम्रो इनबाउन्ड लिंक प्राप्त तर अझै पनि शीर्ष स्थिति मा श्रेणीका लागि संघर्ष.
त्यसैले सबै भन्दा बजार को मनमा hovering साधारण प्रश्न हो: कसरी खोज इन्जिन को पहिलो पृष्ठमा छिटो श्रेणीका?
त्यसैले यो अहिले माथि छ. म gonna शीर्ष एसईओ रणनीति Google मा छिटो आफ्नो वेबसाइट श्रेणीका छलफल छु. हो, के तपाईं सुनेका बिल्कुल सही छ. म ठट्टा होइन.
यो खोजशब्द लागि प्रतिस्पर्धा उच्च छ वा खोज मात्रा त्यसपछि उच्च छ भने यसलाई शीर्ष स्थिति र एकदम असम्भव केही अवस्थामा आफ्नो साइट प्राप्त गर्न कठिन छ त्यो सत्य हो.
किनभने, केही साइटहरु राम्रो गुणस्तर इनबाउन्ड लिंक भएको लामो समय को लागि स्थिति प्राप्त गरेको छ. तर तपाईंले केही शक्तिशाली रणनीति प्रयोग गरेर तिनीहरूलाई जित्न सक्नुहुन्छ महिना वा अझ एक जोडी लाग्न सक्छ जो.
शीर्ष स्थिति प्राप्त अरूलाई देखेर डाह बन्न सक्छ र तपाईं तिनीहरूलाई पिट्न कठिन संघर्ष गर्दै छन्.
तपाईं pondering हुन सक्छ:
किन सबैलाई Google मा शीर्ष आफ्नो रैंक उकास्न चाहन्छ?
अरूलाई भन्दा राम्रो छ, जो पृष्ठ गुगल कसरी थाहा?
केही पृष्ठ अरूलाई उच्च मात्रा खोज छिटो कसरी outrank?
यहाँ म यो भन्दा प्रयोग खोज इन्जिन विश्वव्यापी रूपमा Google को बारेमा कुरा गर्दै छु.
त्यसैले सबै शीर्ष बस्नका लागि प्रेम. यो एक विद्यार्थी हुन सक्छ तपाईं कुनै पनि क्षेत्र को उदाहरण लिन, व्यापार, कम्पनी, चलचित्र अभिनेता, राजनीतिज्ञ सबै आफ्नो क्षेत्रमा शीर्ष रहन चाहन्छ.
लाभ गुगल माथि सब गर्न:
शीर्ष मा रहन तपाईं एक अधिकार रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ मतलब. तपाईंको पृष्ठ eyeballs हजारौं आकर्षित हुनेछ. र सबैलाई आफ्नो आगंतुकों वृद्धि गर्न चाहन्छ.
साँचो तथ्य छ, पहिलो4एक खोजशब्द लागि शीर्ष मा सब वेबसाइट सबैभन्दा आगंतुकों प्राप्त. थप ट्राफिक मतलब थप सामाजिक साझेदारी र थप व्यवसाय, अधिक लाभ.
कम से कम तपाईं श्रेणीका भने 8-10 शीर्ष स्थान मा पोस्ट त्यसपछि आफ्नो अन्य ब्लग खोज इन्जिन माथि अनुक्रमित भइरहेको बिना आगंतुकों प्राप्त हुनेछ.
केही साइटहरु शीर्ष स्थिति मा प्राप्त तर तिनीहरूले एक लामो समय को लागि आफ्नो स्थिति धान्न सक्दैन. त्यसैले म gonna छु तपाईं सिकाउन आफ्नो वेबसाइट Google मा छिटो श्रेणीका शीर्ष एसईओ रणनीति र पनि आफ्नो स्थिति आफ्नो प्रतियोगिहरु 'तपाईं outrank कहिल्यै सकून् पकड सधैंभरि.
कुनै पनि कदम लंघन बिना यो ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् र तपाईं कुनै पनि शङ्का छ भने मलाई पछि सोध्न वा आफ्नो टिप्पणी ड्रप. तर अब तपाईंको फोन बनाउन, फेसबुक, मौन इमेल र पूर्ण पढ्न.
म केहिले कसरी पृष्ठ वा बन्द पृष्ठ गर्न छलफल छु. पढ्न सक्नुहुन्छ:
पृष्ठ एसईओ रणनीति मा शीर्ष आफ्नो साइट खोज इन्जिन मा उच्च श्रेणीका.
सिकारुहरूको लागि एसईओ सुझाव.
म निम्न भागमा मेरो अनुसन्धान विभाजित छन्:
गुगल कसरी एक विशेष खोजशब्द लागि सबै भन्दा राम्रो पृष्ठ फेला पार्न गर्छ?
सामग्री सिर्जना गर्नु अघि एक राम्रो खोजशब्द अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न.
एक मौलिक सामग्री सिर्जना.
ट्याग र छिटो सूचकांक आफ्नो पोस्ट Pinging.
शीर्ष स्थिति अन्य साइटहरु आफ्नो स्थिति outrank सकून् समाउँदै.
गुगल कसरी सर्वश्रेष्ठ पृष्ठ पाता :
तपाईं Google मा कुनै पनि प्रश्न राख्दै गर्दा त तपाईं Google सूचकांक पृष्ठमा खोजी गर्दै, वेबमा छैन. Google वा कुनै पनि खोज इन्जिन केही Bots वा spiders छ, जो एल्गोरिदम केही सेट गरिएका छन्.
को Bots पनि spiders वा रोबोट जो सफ्टवेयर प्रोग्राम हो भनिन्छ. यी Bots गुगल ईन्जिनियरहरु मत्ती Cutts जस्तै द्वारा सिर्जना खोज इन्जिन अनुकूलन केही नियमहरू खुवाउने गरेको छन्.
यी Bots सेकेन्ड अंश भित्र पृष्ठ लाखौं मार्फत जाने र जस्तै उचित शीर्षक ट्याग एसईओ नियम मिल्ने पृष्ठहरू स्क्यान, शीर्षक, खोजशब्द घनत्व, गुणस्तर इनबाउन्ड लिंक, मौलिक सामग्री, स्प्याम्मी आदि पृष्ठ.
र यी कम गुणस्तरीय पृष्ठहरूमा मापदण्ड मिल्ने पृष्ठ हटाउनु र उकास्न. ताकि अनुसार एसईओ को राम्ररी नियम र कार्य जाने. तपाईं Google खोज इन्जिन अनुकूलन नियम अनुसार काम भने तपाईं लाभ प्राप्त हुनेछ.
ठीक तपाईंको खोजशब्द अनुसन्धान गर्न:
एक खोजशब्द सबै दुनिया भर दर्शकहरूलाई तपाईँको पृष्ठको ढोका खोल्न प्रमुख धारण. Google को शीर्ष मा छिटो आफ्नो वेबसाइट श्रेणीका शीर्ष एसईओ रणनीति गर्न अघि बढ्नु अघि, तपाईं आधारभूत खोजशब्द अनुसन्धान जान्नु आवश्यक.
यो एसईओ आफ्नो यात्रा अघि बढ्नु अघि अनिवार्य कदम हो. धेरै विशेषज्ञहरु मा एक खोजशब्द अनुसन्धान गर्न तपाईं भन्नेछु गुगल खोजशब्द योजनाकार. तर साँचो वास्तवमा यो तपाईं पूर्ण परिणाम दिन सक्दैन छ.
तपाईं यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म लामो पुच्छर खोजशब्द लागि खोजी छन्: “तपाईंको पृष्ठ Google मा छिटो श्रेणीका एसईओ सुझावहरू” र यो कुनै पनि प्रदर्शन देखाउन छैन.
म यस उपकरण बेवास्ता गर्न भन्दै होइन. तर तपाईं लामो पुच्छर खोजशब्द खोजी गर्दा यो परिणाम प्रदर्शन हुनेछ. यो केवल छोटो पुच्छर किवर्ड लागि परिणाम प्रदर्शन. जस्तै:
म यसलाई अर्को पोस्ट लिखित छ रूपमा म खोजशब्द अनुसन्धान बारेमा विस्तृत जा होइन. म gonna तपाईंले केही तथ्य कीवर्ड अनुसन्धान बारे छोटकरीमा पुस्तिका छु.
त्यसैले खोजशब्द अनुसन्धान मा चाल छोटो पुच्छर सट्टा लामो पुच्छर खोजशब्द लिन छ. तपाईं लामो पुच्छर खोजशब्द लागि तपाईंको पृष्ठ लक्षित भने यो छोटो पुच्छर लागि यो श्रेणीका गर्न सजिलो हुनेछ.
एक उदाहरण हेरौं, यहाँ म एक पृष्ठ लक्षित 'तपाईंले पहिले सुनेको छैन पृष्ठ एसईओ रहस्य मा शीर्ष' र पहिलो पृष्ठमा तर शीर्ष स्थिति मा छैन सब भयो. र तपाईँले टाइप यदि 'पृष्ठ एसईओ रहस्य मा शीर्ष', जो तपाईं शीर्ष स्थिति मा मेरो पृष्ठ फेला पार्न सक्नुहुन्छ छोटो पुच्छर खोजशब्द छ.
अर्को बिन्दु आउने, तपाईं दुई घण्टा भित्र श्रेणीका गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं एक कम प्रतियोगिता खोजशब्द चयन गर्न. खोज इन्जिन जाने र बीच छ जो खोजशब्द लिन 500000 गर्न 10,00000 औसत मासिक खोजहरू. अन्यथा, आफ्नो साइट सब गरिनेछ तर यसलाई केही समय लाग्नेछ, जो कसैले यो हुनेछ कति समय थाह.
त्यसैले एउटा विषय सम्बन्धित लामो पुच्छर किवर्ड पाउन तपाईं को सहायता लिन सक्छ longtail समर्थक उपकरण, जो एक सशुल्क छ. तर यो आफ्नो समय र पैसा बचत हुनेछ. धेरै एसईओ एजेन्सीहरू र कम्पनीहरु को यस रुचि.
तपाईं एक शिक्षार्थी वा सुरुवातमा भने त्यसपछि उपकरण जाँच Yoast एसईओ सुझाव. यो छोटो पुच्छर प्रविष्टि लागि लामो पुच्छर किवर्ड सुझाव गर्नेछ तर यो औसत मासिक खोजहरू देखाउन छैन.
एक हत्यारा सामग्री सिर्जना:
तपाईंले सुन्नुभयो के फेरि साँच्चै सत्य हो. एक हत्यारा सामग्री सिर्जना. सामग्री अरूलाई मार्न र भाइरल हुन सक्छ कि सामग्री सिर्जना. गहिराई सामग्री सबैभन्दा साझेदारी र पढ्न छन्. त्यहाँ दैनिक अपलोड लेख लाखौं छन्. त्यसपछि तपाईं eyeballs कसरी आकर्षित गर्न सक्छन्?
अब यो तपाईंको सामग्री सिर्जना गर्न समय छ. म तपाईंलाई गुगल नियम अनुसार काम गर्न भनेर भन्नुभयो छ ताकि, मूल र लामो सामग्रीहरू गुगल को स्तर कारक को एक हो.
नक्कली सामग्रीहरू वा काता सामग्रीहरू लेख्न छैन. तपाईं अन्य साइटहरु सङ्केत सामग्रीहरू लेखन भने त तपाईं पछ्याएका छन् यी साइटहरूमा उल्लेख. अन्यथा, आफ्नो साइट द्वारा मारा गरिनेछ प्राप्त पान्डा वा पेन्गुइन अद्यावधिक जस्तै जो खोज इन्जिन आफ्नो साइटमा प्रतिबंध लगान सक्छ.
म नक्कली वा पातलो त्यसपछि सामग्री प्रयोग गरेर माथि श्रेणीका च केही दिन आफ्नो रैंक गिरा हुनेछ र साइट खोज इन्जिन को अन्तिम पृष्ठ गर्न हालियो गरिनेछ पछि.
शीर्षक मा खोजशब्द सम्मिलित, शीर्षक, मेटा विवरण, url , छवि alt पाठ ठीक. महत्त्वपूर्ण वाक्य बोल्ड बनाउन, Italic र बुलेट नम्बर लागू, Bots आफ्नो सामग्री पढ्न को लागि जो सजिलो हुनेछ.
ठीक पृष्ठ एसईओ मा के, यो सूचकांक मुख्य काम हो आफ्नो पृष्ठ र खोज इन्जिन spiders द्वारा प्राप्त फेला खोजिएका गर्न. पाठकहरूलाई आफ्नो साइट जानुभए प्यार हुनेछ कि यस्तो तरिकामा आफ्नो सामग्री सिर्जना.
ट्याग र तपाईंको पृष्ठ pinging:
त्यसैले तपाईं एक कम प्रतियोगिता लामो पुच्छर खोजशब्द लिएको र सामग्री सिर्जना गरेका. त्यसपछि महत्त्वपूर्ण कदम जो को प्रमुख भाग हो आउँछ आफ्नो वेबसाइट Google मा छिटो श्रेणीका शीर्ष एसईओ रणनीति.
यो प्रविधी तपाईंको पृष्ठ बढावा गर्न सक्छन् भित्र2बजे (प्रमाणीत). सबैभन्दा एसईओ कम्पनीहरु श्रेणी बढाउने एउटा गोप्य हतियार रूपमा यसलाई प्रयोग. यो लागि WordPress प्लगइन को सहायता लिन जस्तै छ स्वचालित पोस्ट taggers. यो प्लगइन स्थापना र यो विकल्प मा खोजशब्द र सम्बन्धित किवर्ड थप्न.
पिङ खल्ती इन्टरनेट गोफर लागि खडा छ. पिङ विभिन्न खोज इन्जिन गर्न संकेत पठाउने फिड सेवा छ, बित्तिकै निर्देशिका तपाईं पोस्ट प्रकाशित रूपमा. यसलाई आफ्नो ब्लग खोज इन्जिन द्वारा छिटो अनुक्रमित गर्न मदत गर्नेछ.
म पहिले नै बताए गरेका शीर्ष स्थिति मा सब गर्न भनेर मनमा राख्न खोजशब्द खोज मात्रा कम हुनुपर्छ. अन्यथा, तिमी मलाई दोष छैन. तिमी प्रयोग गर्नसक्छौ pingler.com जो साइटमा निःशुल्क service.Go छ र शीर्षक प्रविष्ट गर्नुहोस् (खोजशब्द), url र विभाग चयन.
अर्को शक्तिशाली विधि आफ्नो WP व्यवस्थापक को सेटिङ निम्न pinging साइटहरु टाइप छ.
http://rpc.pingomatic.com/http://blogsearch.google.com/ping/RPC2http://1470.नेट / एपीआई / pinghttp://api.feedster.com/pinghttp://api.moreover.com/RPC2http://api.moreover.com/pinghttp://api.my.yahoo.com/RPC2http://api.my.yahoo.com/rss/pinghttp://bblog.com/ping.phphttp://blog.goo.ne.jp/XMLRPChttp://blogdb.jp/xmlrpchttp://blogmatcher.com/u.phphttp://bulkfeeds.net/rpchttp://coreblog.org/ping/http://mod-pubsub.org/kn_apps/blogchatthttp://www.lasermemory.com/lsrpc/http://ping.amagle.com/http://ping.bitacoras.comhttp://ping.blo.gs/http://ping.bloggers.jp/rpc/http://ping.cocolog-nifty.com/xmlrpchttp://ping.blogmura.jp/rpc/http://ping.exblog.jp/xmlrpchttp://ping.feedburner.comhttp://ping.myblog.jphttp://ping.rootblog.com/rpc.phphttp://ping.syndic8.com/xmlrpc.phphttp://ping.weblogalot.com/rpc.phphttp://ping.weblogs.se/http://pingoat.com/goat/RPC2http://rcs.datashed.net/RPC2/http://rpc.blogbuzzmachine.com/RPC2http://rpc.blogrolling.com/pinger/http://rpc.icerocket.com:10080/http://rpc.newsgator.com/http://rpc.pingomatic.comhttp://rpc.technorati.com/rpc/pinghttp://rpc.weblogs.com/RPC2http://topicexchange.com/RPC2http://trackback.bakeinu.jp/bakeping.phphttp://www.a2b.cc/setloc/bp.a2bhttp://www.bitacoles.net/ping.phphttp://www.blogdigger.com/RPC2http://www.blogoole.com/ping/http://www.blogoon.net/ping/http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdateshttp://www.blogroots.com/tb_populi.blog?id = 1http://www.blogshares.com/rpc.phphttp://www.blogsnow.com/pinghttp://www.blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgihttp://www.mod-pubsub.org/kn_apps/blogchatter/ping.phphttp://www.newsisfree.com/RPCCloudhttp://www.newsisfree.com/xmlrpctest.phphttp://www.popdex.com/addsite.phphttp://www.snipsnap.org/RPC2http://www.weblogues.com/RPC/http://xmlrpc.blogg.dehttp://xping.pubsub.com/ping/http://zhuaxia.com/rpc/server.phphttp://audiorpc.weblogs.com/RPC2http://blog.youdao.com/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.ae/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.at/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.be/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.bg/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.ca/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.ch/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.cl/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.cr/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.hu/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.id/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.il/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.in/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.jp/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.ma/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.nz/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.th/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.uk/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.ve/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.za/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.ar/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.au/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.br/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.co/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.do/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.mx/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.my/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.pe/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.sa/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.sg/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.tr/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.tw/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.ua/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.uy/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.vn/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.de/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.es/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.fi/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.fr/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.gr/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.hr/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.ie/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.it/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.jp/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.lt/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.nl/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.pl/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.pt/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.ro/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.ru/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.se/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.sk/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.us/ping/RPC2http://rpc.twingly.comhttp://api.feedster.com/pinghttp://api.moreover.com/RPC2http://api.moreover.com/pinghttp://www.blogdigger.com/RPC2http://www.blogshares.com/rpc.phphttp://www.blogsnow.com/pinghttp://www.blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgihttp://bulkfeeds.net/rpchttp://www.newsisfree.com/xmlrpctest.phphttp://ping.blo.gs/http://ping.feedburner.comhttp://ping.syndic8.com/xmlrpc.phphttp://ping.weblogalot.com/rpc.phphttp://rpc.blogrolling.com/pinger/http://rpc.technorati.com/rpc/pinghttp://www.feedsubmitter.comhttp://blo.gs/ping.phphttp://www.pingerati.nethttp://www.pingmyblog.comhttp://geourl.org/pinghttp://ipings.comhttp://www.weblogalot.com/pinghttp://api.my.yahoo.com/RPC2http://api.my.yahoo.com/rss/ping
त्यसपछि सेट लेखन जाने र माथि कोड प्रतिलिपि र अद्यावधिक क्लिक गर्नुहोस्. तपाईं एउटा पोस्ट प्रकाशित प्रत्येक समय यसलाई विभिन्न साइटहरूमा pinged गरिनेछ.
सधैंभरि माथि आफ्नो रैंक होल्ड:
अब तपाईं शीर्ष स्थिति मा सब छ. अब यसलाई कुनै एक तपाईं outrank सक्छन् स्थिति पकड समय छ. धेरै साइट मालिकहरू माथि श्रेणीका तर लामो अवधि लागि स्थिति पकड असफल.
Backlinks स्थिति कायम गर्न प्रमुख पकड. स्थिति पकड तपाईंले केही गुणस्तर इनबाउन्ड लिंक गर्न छ. एक दिन सबै लिंक निर्माण छैन. यसलाई केही समय लाग्नेछ वा तपाईं को लागि काम गर्न सक्छन् कसैले किराया गर्न सक्नुहुन्छ.
इन्जिन खोज प्रेम backlinks र यसलाई प्रमुख स्तर कारक मध्ये एक छ. Backlinks वा इनबाउन्ड लिंक अन्य साइटहरु outranking द्वारा शीर्ष मा आफ्नो पृष्ठ श्रेणीका हुनेछ जो शक्तिशाली हतियार हो. त्यसैले स्वचालित लिंक भवन सफ्टवेयर प्रयोग गरेर खोज इन्जिन मूर्ख बनाउन प्रयास छैन. खोज इन्जिन Bots पर्याप्त स्मार्ट छन्.
तपाईंको सान्दर्भिक विषय देखि backlinks निर्माण. आफ्नो ब्लग खाना आधारित छ र बच्चा हेरचाह ब्लग देखि लिंक निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसपछि मूल्य वास्तै गरिनेछ प्राप्त. निम्न नियम पालना:
पोस्ट लगातार कम्तिमा एक प्रति हप्ता ब्लग.
केही अन्तराल मा पुरानो पोस्ट अपडेट.
आफ्नो उद्योग मा विशेषज्ञहरु संग सम्बन्ध निर्माण र अतिथि ब्लगिंग गर्न.
आफ्नो ठाँउ गर्न माइक्रोब्लगिङ सम्बन्धित गर्न quora प्रयोग.
उच्च पीआर र दा साइटहरु देखि लिंक प्राप्त गर्न प्रयास. धेरै5राम्रो छ.
वेब मा पोस्ट पेश 2.0 ब्लग स्पट जस्तै साइटहरु, wordpress.com, wix.
साथै आगंतुकों र लिंक प्राप्त गर्न सामाजिक मिडिया र सामाजिक बुकमार्क साइटहरु प्रयोग.
निर्देशिका पेश्की साइटहरु को लागि लिंक पेश.
को लागि एक GIG प्राप्त गर्न Fiverr प्रयोग 5$ जहाँ तपाईं प्राप्त आफ्नो काम गरेको जो सुरक्षित हुनेछ तिम्रो समय.
शीर्ष स्थिति मा रही हरेक वेबसाइटको लक्ष्य आज. त्यसैले सबैलाई छिटो अनुक्रमणिका र ठूलो यातायात चाहन्छ. स्पष्ट, प्रतियोगिता अनलाइन व्यापार को कुनै पनि प्रकारको उच्च छ.
तर शीर्ष मा र्याङ्किङ्ग महत्वपूर्ण छ, सधैंभरि श्रेणी पकड महत्त्वपूर्ण छ, जो गर्न सकिन्छ मात्र राम्रो लिंक भवन रणनीति द्वारा.
तपाईं म त उल्लेख गर्नुभएको नियम पालना यदि तपाईं तुरुन्तै परिणाम प्राप्त हुनेछ. तपाईं कुनै पनि सुझाव वा शङ्का मा छ भने आफ्नो वेबसाइट Google मा छिटो श्रेणीका शीर्ष एसईओ रणनीति, तपाईंको टिप्पणी ड्रप र मित्र बीच ज्ञान साझेदारी.
पृष्ठ स्तर कसरी सुधार गर्नकसरी Google मा छिटो श्रेणीकाकसरी Google मा शीर्ष श्रेणीकाएसईओशीर्ष एसईओ रणनीतिआफ्नो वेबसाइट Google मा छिटो श्रेणीका शीर्ष एसईओ रणनीति
Pingback: आफ्नो वेबसाइट Google मा छिटो श्रेणीका शीर्ष एसईओ रणनीति | way2inspiration()
धेरै उपयोगी र महत्वपूर्ण लेख।. तपाईं शीर्ष स्तर प्राप्त गर्न बारेमा सर्वश्रेष्ठ बन्द-पृष्ठ रणनीति बताउन सक्नुहुन्छ .
म सिर्फ विशिष्ट अफपेज एसईओ बारेमा जान्न चाहन्छु र यदि म एङ्कर पाठ को लागि सही किवर्ड प्रयोग त यो एक वेबसाइट लागि हानिकारक हुनेछ?
कुनै यसलाई आफ्नो कृतज्ञता लागि हानिकारक र धन्यवाद हुनेछैन
आफ्नो काम मोल!! तर यहाँ तपाईं द्वारा सबै उल्लेख अंक लागू गरेपछि, मेरो वेबसाइट र्याङ्किङ्ग राम्रो सबै समय हो. मन रही मेरो उद्योग आला मा लिंक निम्नानुसार पनि म थप तरिकाहरू के.
तपाईं थप तरिकाहरू व्याख्या गर्नेछ आशा.
ठीक plz छिटो परिणाम प्राप्त गर्न कम प्रतियोगिता खोजशब्द लिन
यो ब्लग साँच्चै उल्लेखनीय छ. यो ठूलो साझेदारी को लागि धन्यवाद. यो जस्तै बढी उपयोगी र conspicuous सामान साझेदारी राख्न. तिमीलाई धेरै धन्यवाद.
आफ्नो कृतज्ञता लागि धन्यवाद
सस्ता र सजिलो kta
नमस्ते!,म यति त आफ्नो लेखन मन! प्रतिशत हामी स्पर्श एओएल थप लगभग आफ्नो पोस्ट मा राख्न? म मेरो समस्या unravel यो ठाउँ मा एक विशेषज्ञ आवश्यक. शायद भनेर छ! तपाईं हेर्न अगाडि एक नजर ले. |
आफ्नो प्यारी शब्दहरूको लागि धन्यवाद.
meta_keyword मा आफ्नो विचार साझा गर्नुभएकोमा धन्यवाद. सादर|
राम्रो पढ्ने र यो बाहिर साझेदारी को लागि धन्यवाद.
ठूलो लेख! तपाईं म सुरक्षित लिंक र्याङ्किङ्ग वृद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ कुनै पनि सुझाव छ गर्छन्?
Pingback: शीर्ष7एसईओ सुझाव र जुक्तिहरू- way2inspiration()
कसरी वेबसाइटमा थप छिटो अनुक्रमणिका?
यसलाई आफ्नो सामग्री गुणस्तर जस्तै विभिन्न कारक निर्भर, अनुकूलन, डोमेन उमेर, गुणस्तर backlinks.
ध्यान दिएर पढ्न
Pingback: freshers र अनुभवी लागि एसईओ साक्षात्कार प्रश्न र उत्तरहरू()
तपाईं यहाँ हेर्न सक्छन्
म बस म वेबलग नयाँ छु भनेर बताउन चाहन्छु र गम्भीर यो वेबसाइट मनपराएका. लगभग निश्चित म बुकमार्क आफ्नो ब्लग पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ छु . के तपाईं साँच्चै धेरै राम्रो लेखोटहरू साथ. हामीलाई आफ्नो वेबपेज साझेदारी लागि सादर.
तपाईंको प्रकारको शब्दहरूको लागि Thanx.
म खोजशब्द अनुसन्धान साइट श्रेणीका प्रमुख समस्या लाग्छ. हामी कम मात्रा तर कम प्रतियोगिता संग सही खोजशब्द चयन भने हाम्रो साइट थप छिटो Google रैंक मा जान्छ.
तपाईं उच्च प्रतियोगिता किवर्ड लक्षित गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईं उच्च श्रेणीका एक लामो सामग्री र उच्च गुणवत्ता backlinks हुनुपर्छ